Umaki: inhlamvu | Martech Zone
IVero iyinsizakalo yokuthengisa ezenzakalelayo ye-imeyili egxile ekwandiseni ukuguqulwa komsebenzisi nokugcinwa. Usebenzisa ama-imeyili aqondisiwe ungangenisa imali ekhuphukile futhi uthuthukise ukwaneliseka kwamakhasimende. Martech Zone abafundi bangathola isaphulelo esingu-45% kokubhaliselwe kwezinyanga eziyi-6 zohlelo lweVero Small ngokusebenzisa isixhumanisi sethu sokusebenzisana! I-Vero Email Marketing Ifaka phakathi amaphrofayili wamakhasimende angawodwana - Landelela idatha emayelana namakhasimende akho ku-database yakho yababhalisile. Sebenzisa imininingwane oyiqoqayo efana neyakho